Nyaya yaNoa—Kunyeverwa Nezvakamboitika
SARUDZA MUTAURO Abkhaz Afrikaans Albanian Arabic Armenian Baoule Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Bicol Cebuano Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Croatian Dutch Estonian Finnish French Ga Greenlandic Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Indonesian Japanese Kinyarwanda Korean Krio Kwanyama Lithuanian Malagasy Mapudungun Mauritian Creole Mizo Mutauro Wemasaini wechiDutch Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAustria Mutauro Wemasaini wokuCosta Rica Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuGhana Mutauro Wemasaini wokuGuatemala Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPhilippines Nahuatl (Guerrero) Ndebele (Zimbabwe) Nias Niuean Norwegian Nzema Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Romany (Southern Greece) Russian Serbian Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Tongan Totonac Tzotzil Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zulu
Jehovha haazobvumiri vanhu vakaipa kuti vaparadze Paradhiso. Shamwari dzake chete ndidzo dzichagara imomo. Chii chichaitika kuvanhu vakaipa? Kuti uzive mhinduro yacho, chimbofunga nezvenyaya yechokwadi yaNoa. Noa akararama zviuru zvemakore zvadarika. Akanga ari munhu akanaka aiedza nepaaigona napo kuita kuda kwaJehovha nguva dzose. Asi vamwe vanhu vakanga vari pasi pano vaiita zvakaipa. Saka Jehovha akaudza Noa kuti aizounza mafashamo kuti aparadze vanhu vose ivavo vakaipa. Akaudza Noa kuti avake areka kuitira kuti iye nemhuri yake varege kufa paizouya Mafashamo.—Genesi 6:9-18.
Noa nemhuri yake vakavaka areka. Noa akanyevera vanhu kuti Mafashamo akanga achiuya, asi havana kumuteerera. Vakaramba vachiita zvinhu zvakaipa. Areka yapera, Noa akapinza mhuka muareka, uye iye nemhuri yake vakapindawo mukati. Ipapo Jehovha akaunza mvura zhinji. Mvura yakanaya kwemazuva 40 nousiku 40. Mvura yakafashamira pasi pose.—Genesi 7:7-12.
Vanhu vakaipa vakafa, asi Noa nemhuri yake vakapona. Jehovha akavaponesa pamafashamo vachipinda mupasi risina uipi. (Genesi 7:22, 23) Bhaibheri rinoti nguva iri kuuya zvekare apo Jehovha achaparadza vanoramba kuita zvakarurama. Vanhu vakanaka havazoparadzwi. Vachararama nokusingaperi mupasi rinenge rava Paradhiso.—2 Petro 2:5, 6, 9.
Nhasi vanhu vakawanda vanoita zvinhu zvakaipa. Nyika yakazara nezvinetso. Jehovha anoramba achituma Zvapupu zvake kuti zvinyevere vanhu, asi vakawanda havadi kuteerera mashoko aJehovha. Havadi kuchinja nzira dzavo. Havadi kubvuma zvinotaura Mwari pamusoro pezvakanaka nezvakaipa. Chii chichaitika kune vanhu ivava? Vachachinja rimwe zuva here? Vazhinji havazombochinji. Nguva iri kuuya apo vanhu vakaipa vachaparadzwa uye havazomborarami zvekare.—Pisarema 92:7.
Pasi harizoparadzwi; richaitwa paradhiso. Avo vanova shamwari dzaMwari vachararama nokusingaperi muParadhiso pasi pano.—Pisarema 37:29.